China Hydraulic Pneumatic Zvisimbiso Industry Association mhepo nyanzvi bazi yakaitwa zvinobudirira Yueqing, Zhejiang - China Ningnbo Yierka Zvisimbiso
China Hydraulic Pneumatic Zvisimbiso Industry Association mhepo nyanzvi bazi yakaitwa zvinobudirira Yueqing, Zhejiang
Zvinonzi kunzwisisa kuti kubva January 6 kusvika 7, 2018, mukuru musangano rechisere uye wechisere bhodhi musangano pneumatic pabazi China Hydraulic Pneumatic Zvisimbiso Industry Association vakanga vakabudirira rakaitirwa Yueqing, Zhejiang Province. Musoro musangano: New panguva? New ekunze? New chiito.
Cheng Xiaoxia, Mutevedzeri-President wenyika China Hydraulic Pneumatic Zvisimbiso Industry Association, President wenyika Pneumatic Branch, Director kuti National Pneumatic Product Quality Rinotungamirira uye Inspection Center, Lu Bo, Mutevedzeri-President wenyika Pneumatic Branch, Wang Shaoyu, Sachigaro Guangdong Zhaoqing Fang Atmospheric Dynamics Co., Ltd., uye Li Huaiwen, General Manager wenyika Ningbo Yadeke kushandisa michina Industry Co., Ltd. Zhang Lianren, mutevedzeri maneja mukuru Wuxi Institute of Pneumatic Technology, Cao Jianbo, purezidhendi Ningbo Fenghua Pneumatic Industry Association, Sun Yonggeng, mumiririri pamusoro Zhang Cuogen, maneja mukuru Shanghai Xinyi Pneumatic zvinoriumba Co., Ltd., uye nhengo zviyero vakapinda musangano iri nguva. Secretary of pneumatic nyanzvi bazi, Professor He Feng, Purofesa Aerospace uye avhiyesheni, Tsinghua University, akatungamirira musangano.
Under utungamiriri China Hydraulic Pneumatic Zvisimbiso Industry Association uye vadyi kuitwa nhengo dzayo, kuti pneumatic nyanzvi bazi nokutendeka anoita zvayo basa mashandiro maererano Zvipupuriro Association, anotsigira nheyo yokushumira nhengo bhizimisi, uye anoedza kuronga mabasa akasiyana-siyana uye nomwoyo wose rinopedzisa zvose mabasa nekanzuru nokuwadzana. Basa mabasa, vakakomba kuchinja uye upgrading pamusoro pneumatic indasitiri, indasitiri kudzidza exchanges, kukurudzira maindasitiri kukura kuita dzinotevedzana basa:
Members'meetings uye kumisangano Council ichaitwa panguva, uye pneumatic Michina Exchange mabasa vachava sangano panguva imwecheteyo. Muna 2014, mumwe mukuru-magumo Seminar pamusoro pneumatic utsanzi uye kutarisirwa kusimudzirwa ichaitwa muna Yantai, Shandong Province, uye waishandiswa musangano nokuda 7th uye 2nd misangano kanzuru ichaitwa muna Xikou, Zhejiang Province. Muna 2015, pneumatic dzidzo michina ichaitwa muna Fenghua, Zhejiang Province. Musangano rakawedzerwa sachigaro uye National pneumatic indasitiri kukura nomusangano bazi dzakaitwa Tiantai, Zhejiang Province. Musangano wechinomwe wechipiri nhengo uye pneumatic indasitiri kukura nomusangano bazi dzakaitwa Fenghua, Zhejiang Province muna 2016. Muna 2017, nyanzvi achaiswa akarongeka kuchengeta yokuHannover Industrial Exposition kunzwisisa michina yemhando yepamusoro, yepamusoro Pfungwa uye achangobuda kuitika pakati vatorwa pneumatic indasitiri.
Tiine Federation kuna Ningbo, Fenghua, Yueqing, Cixi, Jiaxing uye dzimwe nzvimbo kuti kuongorora uye kuongorora kuvakwa maindasitiri zvemichindwe.
Tinofanira rikurumidze kupanana ruzivo, ita zvakanaka mabhuku pneumatic indasitiri, uye mushumire emakambani uye vashandi ari pneumatic bhizimisi kwose kwose.
Pedzisa dzokororo basa, vainyora mashoko "rechi13 Five-Year hurongwa", uye kutungamirira kukura utano pamusoro indasitiri.
Close ukama neshamwari omunharaunda uye vanoita zvinoverengeka yepamusoro kuvandudza mabasa.
Kusimudzira pokusvika pakati kugadzirwa uye kudiwa, kuvaka zambuko pakati pneumatic mabhizimisi uye vakarondedzera maindasitiri.
Multi gwara mbirikira, kuwedzera simba pneumatic nyanzvi bazi.
Munguva chokupika yechirongwa yeDare rechinomwe, mabasa andinenge napo General Council vakanga zvapedza, uye kushanda nezvinangwa uye mabasa akagadzira pedyo Sub-komiti vakanga vakabudirira kuzadziswa. Vachitungamirirwa remakurukota, iri bhizimisi uye mabhizimisi vari kukura zvakanaka, zvinonakisa hwokugadzira uye unhu pachiyero indasitiri kwave yekudyidzana akavandudzika, uye magariro simba yave kuwedzera. Tinonyatsobvuma kuti pamwe chichiitwa kusimudzirwa uye kuzvishandisa Implementation of "Made in China 2025" uye "Machine Replacement", iro pneumatic indasitiri Veshe chitubu yakanaka.